“မြန်မာအများစုနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်တွင် ၂ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၅၄၈ ဦး COVID-19 ကူရစက်ခံရမှုကြောင့် Lockdown ချထား – စွယ်စုံသုတ
“မြန်မာအများစုနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်တွင် ၂ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၅၄၈ ဦး COVID-19 ကူရစက်ခံရမှုကြောင့် Lockdown ချထား
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအများဆုံးနေထိုင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင် မူအန်းမြို့ “ မဟာချိုင် “ ဒေသရှိ ငါးပုဇွန်အဝယ်ဒိုင်စျေးကြီးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသည့် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးထံတွင် Covid-19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရာမှ ခရိုင်ကျမ္မာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်းအပူတပြင်း ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများပြုလူပ်စဉ် ဆေးရုံတွင် ၃၂ ဦး ၊
ရွေ့လျား Mobile. ဓါတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုတွင် ၅၁၆ ဦးပေါင်း ၅၄၈ ဦးကို ၂ ရက်အတွင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ မြင့်တက်လာတဲ့အတွက် ခရိုင်ဝန်ရဲ့အမိန့်အရ Lockdowns ချထားမှုမြင်ကွင်းအား ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက သတင်းဓါတ်ပုံများအရတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ။
မဟာချိုင်သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၂. ၆ သိန်းနီးပါးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ တသ်ကြော့ပြန် ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်သည့် COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကြောင့် စိုးရိမ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသည် ။
လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ချုပ်ေးအဖွဲ့များအပါအဝင် အဓိက စျေးအဝယ်ဒိုင် အဝင်/အထွက်လမ်းမများ ၊ အခြားလမ်းများအားလုံးကိုသံဆူးကြိုးခွေများချထားကာ လူဝင်/ထွက်သွားလာမှုများမရှိစေရေးအတွက်တင်းကြပ်စွာစောင့်ကြည့်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည် ။
#SiThuMaung #ဂူစည် #Freelance #สมุทรสาคร #มหาชัย
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်လိမ်လည်မှုကြီး ပြန်လည် ကူးယူ မျှဝေ ပါသည်။
“နိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာစကားကျွမ်းကျင်ပြီး ဓမ္မာစရိယအောင် သီလရှင်ဆရာမကြီး”